पुराना गाडी विद्यु`तीय बनाएर देशको पुँजी विदेश जान रोकौँ : महावीर पुन [भिडियो सहित] – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/पुराना गाडी विद्यु`तीय बनाएर देशको पुँजी विदेश जान रोकौँ : महावीर पुन [भिडियो सहित]
काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा वि`द्युतीय सवारी आयातमा कर बढाएकाे भन्दै चाैतर्फी विराेध भइरहेकाे छ । जलविद्युत् उत्पादक देखि, विद्यु`तीय सवारी प्रयाेगकर्ता तथा यससँगै जाेडिएका व्यव`सायीले सरकारकाे निर्णयकाे आलाेचना गरेका छन् ।
यसबीच नेपाल आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष तथा वैज्ञानिक महावीर पुनले विद्युतीय सवारी आयात गर्दा पैसा विदेशिने भए स्वदे`शमै निर्माण गर्न सकिने भन्दै सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् । विद्युतीय सवारी खरिद, प्रयाेग र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विकसित देशकाे अनुमान अनुशरण गर्न पनि उनले सुझाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय कर`मुखी मात्र नभई अध्ययन गरेर विद्युत उपभाेगमा महत्त्वपूर्ण हुने विद्यु`तीय सवारी प्रयाेगलाइ सस्ताे र पहुँच याेग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘विद्युतीय गाडीमा १५० प्रतिशतसम्म कर लगाउनुहुने हा`म्रा नीति निर्माताहरूले पनि बजेट बनाउने बेलामा अध्य`यन गरेर काम गरे राम्रै हुन्थ्यो,’ पुनले भनेका छन् । विभिन्न सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय लगायत ठाउँमा थन्क्याएर रा`खिएका पुराना वा कवाडी भइसकेका गाडीलाइ विद्युतीय बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
‘सरकारले धनी देशका सरकार`हरूले दिए जस्तै विद्युतीय गाडी किन्दा अनुदान दिन नसके पनि त्यति धेरै कर नबढाई दिएको भए चित्त बुझ्थ्यो,’ उनले भने । पुनका अनुसार पुरानf गाडीहरू नेपालमै सजिलै विद्यु`तीयमा परिणत गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सके विद्युत् खपत बढ्ने, वातावरण स्वच्छ हुने र जनता पनि खुसी हुने पुनकाे धारणा छ । पुनले यहाँ विश्वका विभिन्न देशले विद्युतीय स`वारी खरिदमा दिएकाे अनुदान तथा सहुलियतकाे विवरण दिएका छन् ।
४. बेलायतमा £५०,००० भन्दा कम मूल्य`का विद्युतीय गाडी किन्नेहरूलाई सरकारले प्रतिगाडी £३,००० अनुदान दिने गरेका छन् ।
५. क्यानाडामा विद्युतीय गाडी कि`न्नेहरूलाई सरकारले गाडी हेरेर प्रतिगाडी $२,५०० देखि $५,००० सम्म अनुदान दिने गरेका छन्
६. दक्षिण कोरियामा संघीय सरकारले विद्यु`तीय गाडी किन्नेहरूलाई प्रतिगाडी १८२ लाख वन (Won) अर्थात् $१५,६१३ सम्म अनुदान दिने गरेकाे छ । त्यसबाहेक त्यहाँ केही स्थानीय सरकारले पनि प्रतिगाडी १०० लाख वन (Won) सम्म थप अनुदान दिने गरेका छन् ।